“ရထားလမ်းဘေးမှာ ခိုစာနဲ့ ကုန်စိမ်းလေးတွေ ရောင်းနေရရှာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကြီး” - San Thitsa
“ရထားလမ်းဘေးမှာ ခိုစာနဲ့ ကုန်စိမ်းလေးတွေ ရောင်းနေရရှာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကြီး”
အရင်လို တပည့်တွေနဲ့ English စာပြန်သင်ချင်တာပေါ့ သားရယ် အဖိုး…ခိုစာလေး တပွဲ ဘယ်လောက်လဲ။ တပွဲ – ၁၀၀ ပါ သားရယ်၊ ဟုတ် အဖိုး၊ သား ခိုစာကျွေးမယ်နော်။ အေး သား ကျွေးလေ…အဖိုး ထည့်ပေးမယ်။
အဖိုးရေ သံပုရာသီးလေးတွေကော ဘယ်လောက်လဲ (၃)လုံး – ၁၀၀ ပါ သားရယ်၊ ဟုတ် အဖိုး။ အကုန် ယူမယ်နော်။ ကျေးဇူးပါ သားရယ်…မနက်အစောကြီး အများကြီးရောင်းရတာ ဝမ်းသာစရာပဲ။ ဟုတ် အဖိုး…ရောင်းတာ ကြာပြီလား?? မကြာသေးပါဘူး သားရယ်…
အဖိုး အရင်တုန်းက စာသင်တာ သားရဲ့… ကိုဗစ် စဖြစ်တည်းက စာမသင်ရတော့တာ အော…အဖိုးက ဘယ်ဘာသာ သင်တာတုန်း။ English ပါ သားရယ်။ သင်္ဘောသားတွေ တခြား အိမ်ခေါ်သင်တာတွေရှိတယ်။
တယောက်ဘယ်လောက်ယူလဲ အဖိုး တယောက်ကို တလ (၅)သောင်းပါ သားရယ် ဟုတ် အဖိုး…ဒါနဲ့ သား ခိုစာကျွေးတာနဲ့ သံပုရားသီးဖိုး ဘယ်လောက်ကျလဲ အဖိုး၊ (၂၀၀၀)ပဲ ပေးပါ သားရယ်။ ဟုတ် အဖိုး ရော့ ၅၀၀၀၀ ကျပ် သားအတွက် ဒီတလစာ English စာဖိုးပါ အဖိုး
သားရယ်…အဖိုး ဝမ်းသာလိုက်တာ…အရင်လို တပည့်တွေနဲ့ပဲ English ပြန်သင်ချင်တာ ဟုတ် အဖိုး…သားလဲ ဆေးခန်းက ကလေးတွေကို English စာ သင်ပေးဖို့ရှိတယ်…မကြာခင် အဖိုး စာပြန်သင်ရမှာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သားရယ်…စာပဲ ပြန်သင်ချင်တာ
ဪ အဖိုးအဖွားတွေ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတာပဲ…ဝါသနာက စာသင်ချင်ပေမဲ့…ဘဝက ဈေးရောင်းနေရတယ် ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါများ
“ရထားလမျးဘေးမှာ ခိုစာနဲ့ ကုနျစိမျးလေးတှေ ရောငျးနရေရှာတဲ့ အင်ျဂလိပျစာ ဆရာကွီး”
အရငျလို တပညျ့တှနေဲ့ English စာပွနျသငျခငျြတာပေါ့ သားရယျ အဖိုး…ခိုစာလေး တပှဲ ဘယျလောကျလဲ။ တပှဲ – ၁၀၀ ပါ သားရယျ၊ ဟုတျ အဖိုး၊ သား ခိုစာကြှေးမယျနျော။ အေး သား ကြှေးလေ…အဖိုး ထညျ့ပေးမယျ။
အဖိုးရေ သံပုရာသီးလေးတှကေော ဘယျလောကျလဲ (၃)လုံး – ၁၀၀ ပါ သားရယျ၊ ဟုတျ အဖိုး။ အကုနျ ယူမယျနျော။ ကြေးဇူးပါ သားရယျ…မနကျအစောကွီး အမြားကွီးရောငျးရတာ ဝမျးသာစရာပဲ။ ဟုတျ အဖိုး…ရောငျးတာ ကွာပွီလား?? မကွာသေးပါဘူး သားရယျ…
အဖိုး အရငျတုနျးက စာသငျတာ သားရဲ့… ကိုဗဈ စဖွဈတညျးက စာမသငျရတော့တာ အော…အဖိုးက ဘယျဘာသာ သငျတာတုနျး။ English ပါ သားရယျ။ သင်ျဘောသားတှေ တခွား အိမျချေါသငျတာတှရှေိတယျ။
တယောကျဘယျလောကျယူလဲ အဖိုး တယောကျကို တလ (၅)သောငျးပါ သားရယျ ဟုတျ အဖိုး…ဒါနဲ့ သား ခိုစာကြှေးတာနဲ့ သံပုရားသီးဖိုး ဘယျလောကျကလြဲ အဖိုး၊ (၂၀၀၀)ပဲ ပေးပါ သားရယျ။ ဟုတျ အဖိုး ရော့ ၅၀၀၀၀ ကပျြ သားအတှကျ ဒီတလစာ English စာဖိုးပါ အဖိုး
သားရယျ…အဖိုး ဝမျးသာလိုကျတာ…အရငျလို တပညျ့တှနေဲ့ပဲ English ပွနျသငျခငျြတာ ဟုတျ အဖိုး…သားလဲ ဆေးခနျးက ကလေးတှကေို English စာ သငျပေးဖို့ရှိတယျ…မကွာခငျ အဖိုး စာပွနျသငျရမှာပါ ကြေးဇူးတငျပါတယျ သားရယျ…စာပဲ ပွနျသငျခငျြတာ
ဪ အဖိုးအဖှားတှေ အရမျးသနားဖို့ကောငျးတာပဲ…ဝါသနာက စာသငျခငျြပမေဲ့…ဘဝက ဈေးရောငျးနရေတယျ ဆငျးရဲနှမျးပါး အဖိုးအဖှားမြားအတှကျ အတူအကှ ပူးပေါငျး ကူညီလှူဒါနျးလိုပါက ကိုပူတူးနှငျ့ဘျောဒါမြား
← “ငါးဖမ်းသွားခဲ့ရာမှ ငါးတစ်ကောင်မှ မရလာဘဲ ပိုက်ကွန်တွင် ယွမ်၁.၈ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ကြေးဝါလိပ်ကြီးကို ရရှိလာခဲ့သည့်အဖိုးအို
ဗြိတိသျှ ပြတိုက်ရောက်နေတဲ့ မြန်မာ့အမွေအနှစ်စစ်စစ် တန်ဖိုးကြီး ဆင်စွယ်ပန်းပုစေတီတော် →
ကိုယ့်လူတို့ သောက်နေကျ ၁၀၀ တန် ကော်ဖီမစ်ထုပ်ကို ကော်ဖီမှုန့်အစစ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတုန်းပဲလား
လူနာတွေကို ပြန်လည်ကုသပေးတော့မှာကြောင့် ဘိုကင်တင်ဖို့ ဖုန်း၊ လိပ်စာပေးလိုက်တဲ့ ထူးခန့်ကျော်